LucidPix - Mepụta, Dezie ma Kesaa Foto 3D - Ngwa foto # 1 3D nke ụwa
Mepụta & Kekọrịta Foto 3D nke kwụpụrụ
Gwa Onwe gi
N’ Azọ Ọhụrụ
LucidPix bụ ngagharị ngagharị na-enye gị ohere ịmepụta Foto 3D nke na-agbapụta n'ezie! Ugbu a ọ bụla ama ama nwere ike weghara ma tọghata ihe onyonyo 2D ka eserese atọ atọ, gbakwunye okpokolo agba 3D, akwụkwọ mmado na ederede, wee soro ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ma ọ bụ ndị enyi ozugbo.
Kwadoro site n'aka Juicer
Mba nke 1 Community
Lelee ma kesaa foto gị n'etiti obodo 3D nke ndị okike nwere oke agụụ chọrọ ịme ihe ọhụụ na foto.
Brauza gị anaghị akwado vidiyo vidiyo. Ọ bụrụ na o mere, ị ga-ahụ vidiyo dị mma ebe a.
Tọghatara gaa 3D
Jiri mkpịsị ugodi tọghatara foto 2D gị nke nwere ncheta ihe 3D na-emikpu. Enweghị ihe mmetụta pụrụ iche nke ekwentị, igwefoto eserese foto, ma ọ bụ ikike edezi foto chọrọ — AI anyị dị elu na-elekọta ọrụ gị ozugbo.
Tinye okpokolo agba 3D
Mee ka foto gị dị ndụ site na iji okpokoro foto 3D na-atọ ụtọ, wee kekọrịta kpamkpam na Facebook na mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ. Legodị oge mgbe niile, dịka etinyekwara bọọlụ ọhụrụ kwa izu.
Were foto 3D
Enweghị mkpa ọ bụla maka ndị sensọ ma ọ bụ igwefoto igwefoto igwefoto, LucidPix 3D Photo App na-eji AI weghara ma mee foto 3D nke na-awụpụ na ihuenyo gị n'ezie na ngwa iPhone ma ọ bụ gam akporo ọ bụla. Onweghi igwe onyonyo igwe mmadụ abụọ chọrọ.
Chọpụta Ihe Mere Ndị Ọrụ Anyị
Nye anyi 4.2 Kpakpando
Ebumnuche anyị bụ imepụta ụwa kachasị mma maka ọdịnaya 3D na gam akporo na iPhone, ndị ọrụ anyị ekwenye! Lelee ihe ha kwuru n'okpuru.
Nice na mfe ngwa. Dị nnọọ adaba iji.
Ezigbo klọọkụ na arụ ọrụ iji, ọ dabara adaba maka onye ọ bụla chọrọ ị mepụta foto dị iche maka netwọkụ ndị otu ha ma ọ bụ zite ndị ozi.
Mmetụta izizi dị mma. Ọ dị mfe iji, na-arụpụta ọmarịcha mmetụta.
Ngwa a mara mma. Anọ m na-achọ gburugburu foto m ọzọ. Ọ masịrị m na ọganihu nke ngwa a. Ọ na-aka nke ọma oge niile mgbe m mepere ya… kpakpando 5.
Ngwa dị mma. N'ozuzu, enwere m obi ụtọ, atụghịdị anya na nke a. Siri ike 5
Nnukwu ngwa! Echere m na ọ dị njikere ibipụta! Na-atụ anya mmelite ndị ọzọ!
Mmetụta 3D mara mma na eserese ahụ.
Ọ mara oke mma !!! Hụrụ ọmarịcha foto! Zuru okè!
Ngwa kachasị mma, biko gaa n'ihu mmepe!
Enwere m obi ụtọ na ya, ahụrụ m ọmarịcha ahụ, ebumnobi na ike, ọ bụ ihe ohuru.
Na-arụ nnukwu ọrụ. Dị ka ngwa. Daalụ!
Ọ bụ ngwa dị oke mma. M na-akwado ya, na-arụ ọrụ ọma!
Ngwa dị jụụ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Aga m enye gị kpakpando 5 ma ọ bụrụ na ị tinyekwuo nzacha. Ekele!